आर्थिक समृद्धि गरे मात्र देश विकास हुन्छ : डा. महावीर पुन – Everest Times News
आर्थिक समृद्धि गरे मात्र देश विकास हुन्छ : डा. महावीर पुन
राष्टिूय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन अहिले अमरिकामा छन् । आविस्कार केन्द्र सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोत जुटाउने क्रममा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई सहयोग गर्न आव्हान गर्दै विश्व यात्राकै क्रममा उनी अमेरिका आएका हुन् । उनले यो सहयोगलाई महादानको संज्ञा दिएका छन् । अािर्थक मात्र नभएर उनले जो जससँग सीप, बुद्धि र क्षमता छ, त्यसलाई पनि दान गर्न सकिने भन्दै संस्थापक डा. पुनले बिदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सहयोगको आव्हान गरेका हुन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका फिप्नाले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आविष्कार केन्द्र आफनो स्वार्थको लागि नभएर सारा नेपालीहरुका लागि भएको जिकिर गरे । न्यूयोर्कको ज्याक्सन हाइटस्थित थकाली किचनमा भएको कार्यक्रममा आविस्कार केन्द्र सञ्चालनको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै डा. पुनले नेपाललाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउनका लागि व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने र निर्यातमा बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्तव्यका क्रममा, डा. पुनले इन्फ्रास्टूक्चरको विकाससँगै नेपालमा उत्पादित सामग्रीको व्यापारीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उत्पादन र उद्योग कलकारखानाको विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । खोज अनुसन्धान र आविष्कारको संस्कारको विकास नभएका कारण नेपाल सधै गरीब भएको भन्दै उनले आविष्कार केन्द्रले भावी सन्ततीको लागि त्यो संस्कार बसाउन प्रतिभावान युवाहरुलाई मद्धत गर्नेे उनको तर्क छ ।
राष्टिूय आविस्कार केन्द्र भनेको देश विकास गर्ने एउटा अभियान भएकोले केन्द्रले प्रतिभा भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई देशमा बस्ने वातावरण निर्माण गरिदिने बताए । विकसित मुलुकले अध्ययन अनुसन्धान र आविष्कारका लगानी गरेको प्रसंग जोड्दै डा. पुनले आर्थिक विकास हुने खाल्का कुनै पनि नयाँ अवधारणा, उनीहरुको क्षमता र प्रतिभालाई आविस्कार केन्द्रले सहयोग गर्ने जानकारी दिए । अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र कुनै पनि बिषयमा पोख्त जो कोहीलाई आविष्कार केन्द्रमा आएर मेन्टर गर्न पनि समग्र युवाहरुलाई आव्हान गरे ।
आविष्कार केन्द्रकोे अभियान देश विकास र समृद्धिको लागि भएको भन्दै डा. पुनले केन्द्र सञ्चालनको लागि आर्थिक सहयोग महादान गर्न उपस्थित सबैलाई आग्रह गरे । आर्थिकसँगै उनले क्षमता, सीप, र बुद्धिको दान गरेर देश विकास र समृद्धिमा सहभागी हुन सबैलाई आव्हान गरेका छन् । उनले भने, कसैको लहलहैमा लागेर दान नगर्नु, पहिले आविष्कार केन्द्र के हो, यसको महत्व बुझन जरुरी छ र बुझेपछि मात्र सहयोग गर्नुस् । आफ्नो दाजुभाइ, दिदी बहिनी, साथीभाइहरु र धेरै भन्दा धेरै नेपालीलाई आविष्कार केन्द्रको काम र उद्धेश्यको बारेमा प्रचार प्रसार गरेर कम्तीमा १ प्रतिशत नेपालीलाई बुझाउन सकेमा र सहयोग गरेमा केन्द्रको अभियानलाई सार्थकता दिन सकिने भन्दै डा. पुनले त्यसमा सहयोग गर्न सबैलाई आव्हान गरेका छन् । केन्द्रले विज्ञ नेपालीहरुको डाटाबेस बनाउने तयारी गरिहेको जानकारी गराउँदै उनले कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा ल्याएमा त्यसमा सहयोग गर्ने बताए ।
पर्यटन क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान जरुरी रहेको भन्दै डा. पुनले नेपालमा पर्यटन आर्थिक श्रोतको ठुलो श्रोत बन्न सक्ने भएकोले पर्यटक आकर्सित गर्न सरकारले विभिन्न योजना बनाएर पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने तर्क गरे ।
त्यस्तै, केन्द्रले दुर्गम जिल्लाहरुमा औषधी आपुर्ति गर्नको लागि डूोन बनाउन लागेको छ भने, शहरी जनतालाई केन्द्रित गरेर सोलार उत्पादन र कपालमा लगाउने अर्गानिक रंगको उत्पादन गर्ने, कृषि तथा खाडी मुलुकमा काम गर्ने मजदुरका लागि एयर कन्डिसनयुक्त सुट निर्माण र पानी शुद्धिकरणको लागि वाटर फिल्टर निर्माणको लागि अनुसन्धान भईरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै कृषि क्याम्पस रामपुर अध्ययनरत युवाहरुले झिंगा पालेर फोहोर रिसाइकल गरेर झिंगाको लार्भाबाट कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने लागयतको काम भइरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा शशांक लामाको संयोजनमा उठेको २ हजार ३ सय ५५ डलर, नेपाल संघिय समाज अमेरिकाले १ हजार डलर, हिमालयन बुद्धिष्ट कमिटि नेपालका पूर्वअध्यक्ष तेन्जिङ उक्यावको संयाजनमा उठेको ५ सय डलर र मुनिन्द्र बज्राचार्यले ५ सय डलर डा. पुनलाई हस्तान्तरण गरे पनि पुनले आविस्कार केन्द्रको खातामा संकलन गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । फिप्नाका महासचिव पे्रम गुरुङले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधीहरु, पत्रकार लगायत युवा विद्यार्थीहरु उपस्थित थिए । कार्यक्रममा फिप्नाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार विष्टले आविस्कार केन्द्रको कामलाई सफल बनाउने अभियान सहयोग गर्ने र कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिए । कार्यक्रमको विभिन्न अनलाइन मिडियाहरुले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । आविष्कार केन्द्रको अभियानलाई सफल पार्न महादानको लागि आव्हान गर्दै डा. पुन क्यानाडा, जापान, बेलायत, अष्टूेलिया लगायत देशमा पुगिसकेका छन् । उनले अमेरिकाको न्यूह्याम्सायर, बोस्टन राज्यमा नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गरेका छन् भने अन्य राज्यमा पनि भ्रमण गर्ने योजना छ ।
किदुगमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई सपथग्रहण
टिपिएस समाधानको लागी डिसिमा र्‍याली
ल्होसारमा साहित्यकार एवं समाजसेवी पद्मा लिंखा मगर सम्मानित
टिपिएस सुविधा अन्त्यको विरोधमा ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा दायर
न्युयोर्कमा शेर्पा ल्होसारको रौनक, ज्याक्सन हाइटको सडकमा गुञ्जियो ‘क्येक्ये स्होस्हो ल्हाआ गेलो’
तामाङ समुदाय; ल्होछार
तामाङ सोसाइटीले मनायो सोनाम ल्होछार
तामाङ समाजले मनायो सोनाम ल्होछार
भूपू गोर्खा सैनिकको प्रश्न: प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेपत्ता नेपाली सैनिकको तथ्याङ्क र क्षतिपूर्ति खोइ?
कांग्रेसको नजरमा सरकारको एक वर्ष : ओलीको बोली बुझियो, कर्म बुझिएन